यौन सम्पर्क नगरिनै पेटमा बच्चा भएपछि सबै अचम्मित – Janata Times
यौन सम्पर्क नगरिनै पेटमा बच्चा भएपछि सबै अचम्मित
एजेन्सी । विश्वमा एक एक मिनेटमा अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । केहि दिन अघि भारतको विहारमा भएको घटनाले सवैलाई चकित बनाएको छ । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धलाई लिएर डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?
नन्द रिसाएको मात्र थिइनन्, महिलाका पतिले पनि यो को हो भनेर प्रश्न गर्न थाले ? अब ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ । उनले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँग राती सपनामा आएर पतिले यौ’न स’म्बन्ध राखेको अनी बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।तर, जब सम्पूर्ण परिवारलाई यो थाहा भयो, ती महिलाले भनिन् कि यदि तपाईले मलाई घरमा राख्न चाहानुहुन्छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म तिमीलाई केही झुठो केसमा फसाउनेछु। तर यस धम्कीको कुनै असर भएन र परिवारले त्यसलाई घरमा राख्न मानेन ।
धादिङमा जन्ती बस दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु , ४० जना घाइते
बानेश्वरमा पैदल यात्रीको मृत्यु, मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन